के गर्दा ओली हट्छन् ? के गर्दा प्रचण्ड माकुने थाक्छन ? (भिडियो) « Etajakhabar
प्रकाशित मिति : २३ असार २०७७, मंगलवार ११:०५
काठमाण्डौं – नेकपा भित्र विवादको आँधीहुरी चलेको छ । एउटा जीवित पार्टी भित्र विवाद हुनु, माथापच्ची हुनु असामान्य कुरा होइन । पार्टी भित्रबाट चुनिएर प्रधानमन्त्री बन्ने अनि कुनै कारणले तिनको पुन: परिक्षण हुनु पनि असामान्य होइन तर पनि नेकपा भित्रको विवाद असामान्य बन्दैछ । कारण हो, पार्टी फुट तिर जानु र पार्टी भित्रका संयन्त्रहरु भन्दा बाहिरबाट यसको उपचार खोजिनु ।
प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको एउटा समूह जो पार्टीको स्थायी समितिमा अधिकतम बहुमतमा देखिएका छन् भने प्रधानमन्त्रीको अर्को समूह जो स्थायी समितिमा एकदमै कमजोर देखिएछ, ति समूहहरुको टकरावको सिलसिला कहाँबाट सुरु भएको हो ? र, कहाँ पुग्दा कसले के गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ? यो कसरी सकिएला ?
यो भिडियोमा यी सबै कुराहरु समेट्ने प्रयास गरिएको छ । सम्पुर्ण जानकारीलाई एउटा समय रेखामा राखेर अनि बिषयगतरुपमा छुट्टाछुट्टै भन्ने प्रयास गरिएकाले सबैलाई बुझ्न सजिलो हुनेछ । यसले गर्दा विभिन्न समाचारहरु हेरेर अल्मलिनु भएका वा विचार निर्माण गर्दैगर्दा प्रस्ट वा निष्पक्ष हुन नसक्नु भएकाहरुलाई यो भिडियो उपयोगी हुन सक्छ । तल हेर्नुहोस भिडियो :